onlineakhabar.com: अर्चना पनेरुले दिइन् सरकारलाई यस्तो चुनौती ! अब के गर्छ सरकारले?
Amazing Girl, Archana Paneru, National, Nepali News » अर्चना पनेरुले दिइन् सरकारलाई यस्तो चुनौती ! अब के गर्छ सरकारले?
अर्चना पनेरुले दिइन् सरकारलाई यस्तो चुनौती ! अब के गर्छ सरकारले?
धेरै समय अगाडी देखी पोर्न स्टार बन्ने सपना बोकेकी अर्चना पनेरु प्रहरी चौकीमा धेरै पटक पुगीसकेकी छन् । उनको त्यही पोर्न स्टार बन्ने सपनाका कारण उनि धेरै चर्चामा पनि आइन् भने त्यही चर्चाको फाइदा लिनका लागि केही नेपालका फिल्म डाइरेक्टरले उनलाई रोजेर फिल्म समेत बनाउन भ्याए ।
नेपालको कानुनले गर्दा उनि पोर्न स्टार बन्नको लागि बाधा बनेको भए पनि एकाएक उनले पोर्नहब नाम गरेको पोर्न साइट जोइन् गरी आफ्नो पोर्न भिडियो राखेर आफ्नो पोर्न यात्राको शुरुवात गरेकी छन् ।
धेरै देशहरुमा युवाहरुलाई पोर्नको लत नलागोस् भन्नका लागि धेरै भन्दा धेरै पोर्न साइटहरु ब्लक गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्ता धेरै साइटहरु अोपन नै गरिएको छ । यदि सरकारले चाहने हो भने त्यस्ता साइटहरु खोज्दै ब्लक गर्न सक्छ । तर अर्चना पनेरुले यसरी नेपालमै बसेर पोर्न भिडियोहरु सार्वजनिक गरिरहँदा नेपालको प्रशासन तथा कानुनले कसरी हेर्नेछ? अनि उनलाई कुनै किसिमको कारवाही हुन्छ हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
Tags : Amazing Girl Archana Paneru National Nepali News